ကမ္ဘာလည်နေတာ တကယ်လား…… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကမ္ဘာလည်နေတာ တကယ်လား……
Posted by we R one on Jun 13, 2011 in Creative Writing | 20 comments
တစ်ခါတုန်းကလို့ ပဲပြောရမလား.. အရင်တုန်းကလို့ပဲပြော ရမ လားပဲ.. ကျွန်မ တို့ ကျောင်းတက်တုန်းက ပေ့ါ.. (အခုတော့ မတက်တော့ဘူး) ပထ၀ီဝင် သင်ရတယ်လေ.၅ တန်း ၊ ၆ တန်းလောက် ဖြစ်မယ်ထင်တယ်..ကျွန်မ ကလည်း စာကျက်တာ တိုးတိုးတိတ်တိတ် မကျက်တတ်ဘူး အမြဲတမ်းအာပြဲအောင် အော်ကျက်နေကျ၊ အိမ်နား က ကိုယ်နဲ အတန်းတူးတဲ့ ကလေး တွေနဲ သူ့ထက်ငါ ပအပြိုင်ကျက်ကြတာ အသံပိုကျယ်အောင်ကျက်တာ.. ပိုဂုဏ်ရှိတယ် ထင်လို့လေ.. ရွာမှာဆိုတော့လေ။ အဲဒါ နဲ ပထ၀ီဝင် ကျက်တော့ ဂြိုလ် ကိုးလုံး က နေကို လှည့်ပတ်နေတယ်ပေါ့.. အဲဒီဂြိုလ် ကိုးလုံးထဲမှာပါတဲ့ ကျွန်မ တို့နေထိုင်ရာ ဒီကမ္ဘာကြီးလည်း လှည့်ပတ်နေတယ်ပေါ့ အဲဒါကြောင့် နေ့ နှင့် ည ဖြစ်လာတာ ဘာညာ ပေါ့… ပြီးခင်ပဲ အိမ်နားမှာ နေတဲ့ အဖိုးတစ်ယောက်က ကျွန်မဆီကို ရောက်လာပြီး သမီး စာကျက်တာ မှားနေတယ် ဆိုပြီးလာ ပြောတာ.. တကယ်တော့ ကမ္ဘာ က နေ ကိုပတ်နေတာမဟုတ်ဘူး နေ ကသာ ကမ္ဘာကို ပတ်နေတာတဲ့ .. သမီးကြည့်ပါလား နေက အရှေ့ က ထွက်ပြီး အနောက်ကို ၀င်သွားတာတဲ့.. ကျွန်မ ကလည်း ဘယ်ရမလဲ ငြင်းတာပေါ့.. နောက်ဆုံး သူ့ကို အရှုံးပေးလိုက်ရတယ်.. သူမေးတဲ့ မေးခွန်းက ” ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီး က ပေါ့နော် အခု ရန်ကုန်လေဆိပ်ရဲ့ အလည်တည့်တည့် မှာ မဆင်းသက်ပဲ မိနစ် ၃၀ လောက် ရပ်နေမယ် တကယ်လို့သာ ကမ္ဘာကြီး လည်နေတယ် ဆိုရင် လေယာဉ် အောက် က နေရာဟာလည်း တခြားနေရာ အဖြစ်ပြောင်းသွားလား .. မပြောင်းဘူးဆိုရင် ကမ္ဘာ လည်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့..
ကျွန်မ ဘာမှ ပြန်မပြောနိုင်ခဲ့ပါ….
Yo,This is logic
အင်း … လပေါ်မှာ စိုက်ထားတဲ့ အမေရီကန်အလံကို ကင်မရာနဲ့ကြည့်နေတာရှိပါတယ်။
ဂြိုလ်တုကတဆင့်ကြည့်လားတော့မပြောတတ်ဘူး။ ပြဿနာက အဲဒီအလံက လေထဲမှာ လွင့်နေတယ်တဲ့
ဒါကြောင့် လပေါ်လူရောက်တာ အတုကြီးတဲ့ .NASA ပြဿနာတက်ဘူးတယ်။
သူတို့ပြန်ချေပတာက မယုံရင် ကိုယ့်ဖာသာတက်ကြည့်တဲ့ …။ အဲဒီအကြောင်း ခွေထွက်တယ်ပြောတယ်
ကျနော်တော့မကြည့်ရသေးဘူး ..။ ရှိရင်ညွှန်းကြပါ။
သွားနေတဲ့ရထားပေါ်မှာ.. ကိုင်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံအိပ်.. အောက်မှာအမှတ်အသားတခုလုပ်ပြီး… တည့်တည့်ကျအောင်ပစ်ချကြည့်ပါလား…။
ရထားသွားနေတာမို့ ..နေရာလွဲမလား.. တည့်တည့်ကျမလားသိရအောင်…။
First law: Every body remains inastate of constant velocity unless acted upon by an external unbalanced force.This means that in the absence ofanon-zero net force, the center of mass ofabody either remains at rest, or moves ataconstant velocity.
Third law: The mutual forces of action and reaction between two bodies are equal, opposite and collinear. This means that wheneverafirst body exertsaforce F onasecond body, the second body exertsaforce −F on the first body. F and −F are equal in magnitude and opposite in direction. This law is sometimes referred to as the action-reaction law, with F called the “action” and −F the “reaction”. The action and the reaction are simultaneous.
လူပြိန်းလို နည်းနည်းလောက် ပိုရှင်းပြပါလား သဂျီးရယ်။ မဝရုန်း လုပ်လိုက်တော့ ကျနော်လည်း အင်တင်တင်ဖြစ်သွားတယ်။ သူပြောတာလည်း ဟုတ်တုတ်တုတ်။
သဂျီးပြောတဲ့ အရှိန်နဲ့သွာနေတဲ့ ရထားပေါ်က ပစ်ချလိုက်တဲ့ပစ္စည်း တည့်တည့်မကျတာကြောင့် အဲဒီဘကြီးပြောတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ လူပြိန်းသိ သိနိုင်ပါတယ်။
နယူတန်ပထမသီအိုရီမှာ ကမ္ဘာကလည်နေတယ်၊ နေကရပ်နေတယ်။ မဝရုန်းဘကြီး ငြင်းတာ ဟုတ်ခဲ့ရင် လေယဉ်ဆင်းတဲ့အခါ လွဲနေရမယ်။ ကျနော် ညဏ်မှီသလောက် စဉ်းစားကြည့်တာ လေယဉ်က အောက်ကိုဒေါင်လိုက်ဆင်းတာမဟုတ်ဘဲ အရှိန်နဲ့ လျောထိုးဆင်းတာဆိုတော့ ကမ္ဘာလည်တဲ့နှုန်းကိုပါ တွက်ဆင်းလို့ ရတာနေမှာပေါ့။
ငယ်ငယ်က သင်ဖူးတဲ့ အီနားရှားသီအိုရီဆိုတာ အဲဒီပထမသီအိုရီ ပဲနဲ့တူဒယ်။ ကားစရွေ့တဲ့အခါ ကားပေါ်ကလူတွေ ရှေု့ငိုက်သွားပြီး နောင်ကျတော့ ငြိမ်သွားတာနဲ့ ဥပမာပေးတာလား မသိဘူး မှတ်မိတယ်။ တူညီတဲ့အလုပ်ရှိမှ အရွေ့ရှိတယ် ဆိုလားဘာလား။ အဲဒါနဲ့ လည်နေတဲ့ကမ္ဘာနဲ့ လေယဉ်ပျံ ဘယ်လိုစပ်ဆက်ရမလဲ၊ အကူအညီတောင်းပါတယ် သဂျီးမင်း…..
ရထားပေါ်က..ရထားနဲ့အတူတူရွေ့ နေတဲ့ လေထုကလည်း .. အရှိန်နဲ့ အတူတူရွေ့နေတာမို့ ပါ။
ရထားပေါ်ကပစ္စည်း..ရထားအပြင်ကို ပစ်ချလိုက်ရင်လည်း.. အဲဒီပစ္စည်းဟာ..အင်နားရှားနဲ့… ရထားနဲ့အတူတူ.. တော်တော်လေးပါလာပြီးမှ..ကျကျန်ရစ်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်..။
ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးက ရန်ကုန်လေဆိပ်ရဲ့ အလည်တည့်တည့် မှာ မဆင်းသက်ပဲ မိနစ် ၃၀ လောက် ရပ်နေမယ်ဆိုရင်လည်း.. အဲဒီလေထုကလွတ်တဲ့အထိမဟုတ်တဲ့အမြင့်ဆို… ကမ္ဘာမြေနေရာပြောင်းမြင်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး..။
ပေ ၄-၅ထောင်လောက်အမြင့်တက်ပြီးမှ.. (လေထုတော်တော်ပါးသွားတဲ့အထိတက်ပြီးမှ) ဆင်းမယ်ဆိုရင်တော့..ကမ္ဘာ့မြေနေရာပြောင်းသွားတာမြင်ရတော့မှာပါ…။
လွန်းပျံယဉ်လို.. အာကာသထဲအထိ တက်သွားပြီဆိုရင်တော့… ကမ္ဘာကြီး ၂၄နာရီမှာ တပါတ်လည်နေတာ မြင်နိုင်ပြိး.. ဆင်းဖို့ တက်ဖို့တွေအတွက် တွက်ချက်လုပ်ရတော့မယ်ပေါ့..။
သာမန်အားဖြင့်… ခရီးသွားလေယဉ်တွေ.. အဲဒီလို ကမ္ဘာလည်နေတဲ့အပေါ်မှာ အကျိုးခံစားမှုရယူပြီး.. သွားနေကြတာပါ..။
ဆိုလိုတာက… ရန်ကုန်ကနေ နယူးယောက်ကို.. သွားရင်.. ကမ္ဘာက နာရီလက်တန်အတိုင်းလည်နေတာမို့ … အချိန်ပိုသက်သာပြီး.. နယူးယောက်က ရန်ကုန်ဆိုရင်တော့ … ပိုကြာမယ်ပေါ့..။ လေဆန်-လေစုံသဘောပါပဲ..။
ကားစရွေ့ရင်… လူကိုယ်ကြီးနဲ့ခေါင်းက… ကားနဲ့အတူတူပါမသွားသေးပဲ..ကျန်ခဲ့တာမို့ .. ခေါင်းကလန်သလိုဖြစ်ရမှာပါ..။
.မောင်းနေတဲ့ကားက..ေ၇ှ့မှာတခုခုကို …တိုက်တယ်ဆိုရင်တော့… ကားနဲ့အတူတူရွေ့ နေတဲ့လူ့ခန္ဓာက… ကားကရပ်ပေမဲ့..(ထိုင်ခုံခါးပါတ်မပါတ်ထားရင်) ကားအရှိန်အတိုင်း ရှေ့ ဆက်ထွက်သွားတာမို့ … မှန်ကိုကျော်ပြီး လွင့်ထွက်တာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်..။
ဆိုတော့.. ကမ္ဘာဧရာမကြီးမှာ.. လူပိစိကွေး.. အဆောက်အဦးပိစိကွေးတွေက.. ဇောက်ထီးဖြစ်နေမှန်းမသိရလောက်ကို…ဆွဲကပ်ထားခံရပြီး. ဇောက်ထီးကြီး တွဲလောင်းဖြစ်နေလည်း… မသိရေးချမသိ…။
ဘောလုံးပေါ်က…ဗက်တီရီးယားတွေက… ဘောလုံးကြီင်္းလုံးနေမှန်းလည်းမသိ… အောက်မှာကပ်နေမှန်းလည်းမသိရေးချမသိသလိုပေါ့..
ရှေး နှစ်၂၅၀၀ ဘုရားဖွင့်ချိန်လောက်က လူတွေကတော့… ကမ္ဘာအကြောင်းမသိတာမို့ … အပြားကြီးမှတ်ပြီး.. မြေပုံတွေထုတ်.. မြင့်မိုရ်တောင်တွေ.. ဘာတွေလုပ်ထားခဲ့သပေါ့..။
အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတော့..အဲဒီခေတ်တွေမှာ.. ကမ္ဘာလုံးတယ်ဆို.. “သတ်”..ပဲ..။:)
အောက်က ဇယားအရ.. ရန်ကုန်မြို့ ပလက်ဖောင်းမှာရပ်နေတဲ့သူက.. တနာရီ မိုင် ၉၀၀ကျော် ၁၀၀၀လောက်နဲ့.. ခရီးသွားနေတာပါ..။
•How fast is the Earth spinning? 0.5 km/sec
•How fast is the Earth revolving around the Sun? 30 km/sec
•How fast is the Solar System moving around the Milky Way Galaxy? 250 km/sec
•How fast is our Milky Way Galaxy moving in the Local Group of galaxies? 300 km/se
HOW FAST IS THE EARTH SPINNING AROUND ITS AXIS?
axisThe Earth is spinning around its axis. At the equator, the Earth’s surface moves 40,000 kilometers in 24 hours. That isaspeed of about 1040 miles/hr (1670 km/hr or 0.5 km/sec). This is calculated by dividing the circumference of the Earth at the equator (about 24,900 miles or 40,070 km) by the number of hours inaday (24). As you move toward either pole, this speed decreases to almost zero (since the circumference of the spinning circle at the extreme latitudes approaches zero).
(ဘောလုံးပေါ်က…ဗက်တီရီးယားတွေက… ဘောလုံးကြီင်္းလုံးနေမှန်းလည်းမသိ… အောက်မှာကပ်နေမှန်းလည်းမသိရေးချမသိသလိုပေါ့…)
ကမ္ဘာပေါ်က ပုရွက်ဆိတ်ကလေးကို ဧ၀ရတ်တောင်ကိုပြရင် သူမနိုင် မမြင်နိုင်သလိုပေါ့ …
ကမ္ဘာပေါ်က လူတွေကို မြင့်မိုရ်တောင်အကြောင်းပြောရင် လူသာမာန်မျက်စိ အသိဥာဏ်ဖြင့် မသိနိုင် မမြင်နိုင်တာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ် မဟုတ်လား ….
အလကားပါ အန်တီဝေရယ်။ ဧဝရက်တောင်ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ကမ္ဘာမှာအမြင့်ဆုံးဆိုပြီး မြင်လည်းမမြင်ရဘူး၊ ဟိမဝန္တာတောင်တန်းတို့၊ ရော့ကီးတောင်တန်းတို့ ဆိုတာလည်း ယုံတမ်းတွေ၊ သူတို့လည်း ရှိရင် လှမ်းမြင်ရမှာပေါ့။ ဒီခေတ်မှာ ကွန်ပြူတာပညာနဲ့ ကြိုက်တဲ့ပုံ လုပ်လို့ရနေပြီပဲ၊ မယုံရင် ပုရွက်ဆိတ်ကလေးကို ဂေါ်ဇီလာဖြစ်အောင် လုပ်ပေးမယ်။
“ရန်ကုန်မြို့ ပလက်ဖောင်းမှာရပ်နေတဲ့သူက.. တနာရီ မိုင် ၉၀၀ကျော် ၁၀၀၀လောက်နဲ့.. ခရီးသွားနေတာပါ..။”
သူတို့ပြောသလိုဆို စကြာဝဠာကြီးက ပြန့်ကားဆန့်ထွက်နေတာဆိုတော့
အဲဒီအရှိန်နှုံးများ သိနိုင်ရင် အဲဒါပါထည့်ပေါင်းလို့ရဦးမှာ ထင်ပါတယ်။
ဒီမှာ တစ်ခုပြောပါရစေ။ ဒီပို့စ်နဲ့ ပတ်သက်ရင် အရှည်ကြီးပြောရမှာမို့ စာအုပ်ပဲညွှန်းရပါမယ်။ Einstein ရဲ့ General relativity and Special relativity မူရင်း သို့မဟုတ် ဘာသာ ပြန်ထားတဲ့ စာအုပ်တွေ ရှိပါတယ်။ တက္ကသိုလ် ကြယ်ပွင့် ဘာသာပြန်တဲ့စာအုပ်တွေ မုံရွေးစာအုပ်တိုက်က ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အလွတ်သဘော အရပ်စကားနဲ့ ပြောကြည့်ပါမယ်။ မှားရင် ပြင်ပေးကြပါ။ မောင်းနေတဲ့ bus ကားပေါ်က ခုံ (၁)နဲ့ (၂) မှာ လူနှစ်ယောက် လိုက်ပါလာတယ် ဆိုပါစို့ ။ အဲဒီလူနှစ်ယောက် ရွေ့နေပါသလားမေးရင် ဘယ်လိုဖြေမလဲ။ ရုတ်တရက် ဆိုရင် မရွေ့လို့ ဘာဖြစ်ရမှာလဲ လို့ ပြန်မေးရပါမယ်။ ဒီမှာ ကြည့်သူရဲ့တည် ရှိနေမှု (Einstein ရဲ့ frame) နဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ ကားပေါ်က ခုံ(၁)ပေါ်က လူက ခုံ(၂)ပေါ်က လူကိုကြည့်ရင် မရွေ့ပါဘူး။ ခုံ(၂)ပေါ်မှာ ပါပဲ။ အပြန်အလှန်ပါပဲ။ ကားပေါ်က ခုံ(၂)ပေါ်က လူက ခုံ(၁)ပေါ်က လူကို ပြန်ကြည့်ရင်လည်း ခုံ(၁)ပေါ်မှာ ပါပဲ။ ဘယ်သူမှ ခုံပေါ်ကနေ မရွေ့ပါဘူး။
လမ်းဘေးက ကြည့်နေတဲ့ လူတစ်ယောက် အတွက်ဆိုရင်တော့ ခုံ (၁) နဲ့ ခုံ(၂) က လူနှစ်ယောက် စလုံး ရွေ့နေပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါ ဘယ် frame ကနေကြည့်မှာလဲ ဆိုတဲ့ ကြည့်သူရဲ့ တည်ရှိမှုနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ နှိုင်းရသဘောပေါ် မူတည် ပါတယ်။
ဒီလိုပါပဲ ကမ္ဘာ လည်နေတာ ကို ဘယ်ကနေကြည့်မှာပါလဲ။ ကမ္ဘာကြီးပေါ်က ကြည့်ရင် အဖြေတစ်ခုပါ။ အာကာသထကဲကြည့်ရင် အဖြေတစ်ခုပါ။ frame ရဲ့ speed ပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ speed ချင်းတူနေရင် အဖြေက တစ်မျိုးပါ ။ အဲဒီ relativistic effective ဆိုတာကို Einstein က အများကြီး ဆက်ပြောခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်။ length contraction, time dilation စတာတွေပါ။ အများကြီးပြောရမှာမို့ ဒီလောက်ပဲ ပြောပါရစေ။
ကျွန်တော့် ဆရာတစ်ယောက်က ရီစရာပြောခဲ့တာ မှတ်မိပါတယ်။ အကယ်၍ ကမ္ဘာလည်နေတာဆိုရင် ကမ္ဘာကြီးက ချားလည်သလို လည်နေမှာပါတဲ့။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးက ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာနေတော့ ချားစီးနေကြတာနဲ့ တူတာပေါ့နော်။
ချားစီးနေတဲ့လူတွေ ဆိုတော့ ……..ဟဲဟဲ ရီစရာပြောတာပါ။
relativistic effect ပါ. လက် အရှိန်လွန်သွားလို့ သည်းခံ ဖတ်ပေးပါ။
တကယ်တော့ ကမ္ဘာလုံးတာနဲ့ ပြားတာက ကျွန်တော်အတွက် သိပ်ပြီး အရေးမကြီးပါဘူး။ ဒါက Scientist တွေ အတွက်ပါ။ ကိုယ် မသိခင်မှာ ကမ္ဘာကြီးက ပြားချင် ပြားသွားမယ်။ လုံးချင် လုံးသွားမယ်။ မှန်တာ ပြောရရင် ဒီရွာသားတွေထဲမှာ ကမ္ဘာ့ကြီး လည်နေတာကို ကိုယ်တိုင် မျက်မြင် မြင်ဖူးတဲ့ လူ မရှိလောက်ပါဘူး။ လက်တွေ့ ပြောတာနော်။ ဒီအယူအဆက တယူသန် ဆန်တယ်လို့ ထင်ချင် ထင်ကြမှာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ အခုအချိန်မှာ MG ကနေ ပိုက်ဆံဘယ်လို များများ ယူရမလဲဆိုတာပဲ တွေးတယ်။ ကျွန်တော် ပိုက်ဆံများများ ရရင် ကမ္ဘာ့ကြီး လုံးတယ်ပေါ့။ မရရင်တော့…။
ဟောဗျာ .. ကမ္ဘာလည်တယ်ဆိုတာအ ပေါ်အောက်လည်နေတာမဟုတ်ဘူးလေလို့ ….
အမေရိကန်က အပေါ်ရောက်လိုက် မြန်မာက အပေါ်ရောက်လိုက် လည်နေတာမျိုးမှမဟုတ်ဘဲ
သူ့ဝန်ရိုးပေါ်မှာသူလည်နေတာဘဲ ..။ သကြားလုံး တလုံးကို ဒုတ်ထိုးပြီး လှည့်ကြည့်ပါလား
အရှိန်နှုန်းလဲထည့်တွက်ရမယ်နော … လေထဲမှာ နာရီဝက်လောက် နေတဲ့အချိန်နဲ့ ပြန်ဆင်းရင် တနေရာထဲဖြစ်နေတာ လည်တဲ့အရှိန်တွက်ရင် အဖြေပေါ်မှာပါ။ အာကသထဲ အကြာကြီးထွက်နေတယ်
ပြန်ဆင်းတော့ target ရောက်အောင် ဘယ်လိုဆင်းလဲဆိုတာ သိရင်လဲ အဖြေပေးပါတယ်။
NASA ကိုလှမ်းမေးထားတယ်။ ကွန်မကောင်းလို့ခဏစောင့် ..။ ရထားပေးက ယင်ကောင်လေးကတော့
physic ပြန်ဖတ်ပါ …ဟဲဟဲ ..။
အပေါ်မှာ နာရီဝက် ရပ်ပြီး ဆင်းတာ သူ့နေရာနဲ့ သူ တည့်တည့် ကျတာ.. ဆွဲအား စက်ကွင်းထဲမှာရှိနေတာရယ် လည်နေတဲ့ အရှိန်နှုန်း ရယ်ကြောင့်လို့ သုံးသပ်ပါတယ်။
အာကာသကနေသာ နာရီဝက် ရပ်ပြီး တည့်တည့် ထိုးဆင်းလာမည် ဆိုလျှင်တော့ နာရီဝက် မတိုင်ခင်က နေရာ နဲ့ ဆင်းမဲ့ နေရာ မတွက်လို့ မရပါဘူး။
နောက်တခါ အဘိုးကို ပြန်မေးလိုက်.. အဘိုး အပေါ်ကို တည့်တည့် သရေကွင်း ထောင်ပစ်ရင် နဖူးပေါ် ပြန်မကျတာ ဘာကြောင့်လဲလို့.. ကမ္ဘာကြီး လည်နေလို့ ဘေးချော်သွားတာ ဖြစ်မှာပေါ့လို့ ပြန်ပြောလိုက်ပေါ့။
ကမ္ဘာကြီးလည်မလည်ကိုတော့ ပြောမနေနဲ့တော့ဗျို့… ကွန့်မန့်တွေဖတ်ပြီး လူကိုတော်တော်လေး ဒေါင်ချာဆိုင်းသွားတာပဲ…
“ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီး က ပေါ့နော် အခု ရန်ကုန်လေဆိပ်ရဲ့ အလည်တည့်တည့် မှာ မဆင်းသက်ပဲ မိနစ် ၃၀ လောက် ရပ်နေမယ် တကယ်လို့သာ ကမ္ဘာကြီး လည်နေတယ် ဆိုရင် လေယာဉ် အောက် က နေရာဟာလည်း တခြားနေရာ အဖြစ်ပြောင်းသွားလား .. မပြောင်းဘူးဆိုရင် ကမ္ဘာ လည်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့..”
ဒီကိစ္စမှာ ကတော့ ဒြပ်ဆွဲအား ပြဿနာပါ။ ရဟတ်ယာဉ်က ကမ္ဘာ့ဒြပ်ဆွဲအား စက်ကွင်းအတွင်းမှာပဲ ရှိနေတဲ့အတွက် ကမ္ဘာ လည်သလို လိုက်လည်နေမှာပါ။ တခြားနေရာ အဖြစ်ပြောင်းသွားလား ဆိုရင် မပြောင်းပါဘူး။ ဆွဲအားစက်ကွင်းလွတ်တဲ့ ကမ္ဘာ့ အပြင်ဘက် မှာရောက်နေတဲ့ ဝတ္ထုသာဆိုရင် သူ့ဟာသူ ရှိနေမှာပါ။ ကမ္ဘာ ကြီးလည်တာ သူနဲ့မဆိုင်တော့ပါဘူး။ အပေါ်မှာ ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ frame သဘောတရား အတိုင်းပါပဲ ခင်ဗျာ။
ဒီလိုကျတော့လဲ မြန်မာလူစွမ်းကောင်းတွေ ပေါပါ့… ၀င်ပြောစရာစကားတောင်မရှိတော့ဘူး..